Shaahley Sacuudiyaan Ah..Arag Noolasha Qarsoon ee Sacuudiga | Xaqiiqonews
Shaahley Sacuudiyaan Ah..Arag Noolasha Qarsoon ee Sacuudiga
Baraha bulshada waxaa lagu baahiyey muuqaalka xaalad murugo ah oo ay la nooshahay haweeney da’ ah oo sacuudiyaan ah, taasi oo shaah ku iibiso wadooyinka Tabuuk.
Haweeneyda ayaa muuqaalka dhaxdiisa ku sheegeysa in ay tahay garoob la soo furay, faqiir ah islamarkaana ku nool guri ijaar ah, iyadoo sheegtay in daruufta ay ku qasabtay shaqadan si ay u dabarto noolasha qoyskeeda.
Dad badan ayaa falcelin ka sameeyey muuqaalka gaar ahaan dadka isticmaala Tuwiterka , waxaana durba bilowday Hashtag ah -Shaahleydd-Tabuuk,
Sidoo Kale Aqri..Haweeney Xanuunsan Oo Qofkii U Dhawaadaba Uu Suuxaayo!
Qaar ka mid ah dadkii daawaday ayaa muujiyey qaabka ay uga naxsanyihiin sida daruufaha ay u saameeyaan Sacuudiga, halka kuwa kalane ay dalbanaayeen meel lagala xariiri karo haweeneyda si ay u caawiyaan.
Mid ka mid ah dadka Tuwterka ku baahiyey muuqaalka ayaa qoray “Dadku sidan ayey u noolyihiin xilliga bin Salmaan, qoysas badan oo Sacuudiyaan ah ayaana ku nool meel ka hooseysa khadka faqriga-mana jirto cid war ka heysa”.